आइसिसी विश्वकप लिग : ओमानद्वारा नेपाल आठ विकेटले पराजित : RajdhaniDaily.com -
Home Breaking News आइसिसी विश्वकप लिग : ओमानद्वारा नेपाल आठ विकेटले पराजित
काठमाडौं । आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग दुईमा ओमानले नेपाललाई आठ विकेटले पराजित गरेको छ । ओमानले नेपाललाई लगातार दोस्रो पटक हराएको हो । यसअघि ओमानले नेपाललाई पहिलो खेलमा १८ रनले पराजित गरेको थियो । ओमानका अगाडि नेपाली बलर निरही बनेपछि ओमान सहजै विजयी भएको हो ।
कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा ओमानले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि नेपाल ब्याटिङमा उत्रेको थियो । नेपालले ओमानसामु जितका लागि २५० रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो । नेपालले ५० ओभर पूरै खेल्दै आठ विकेटको क्षतिमा २४९ रन बनाएको थियो । दुई सय ५० रनको विजय लक्ष्य ओमानले ४७ दशमलव दुई ओभरमा मात्र दुई विकेट गुमाएर पूरा ग¥यो । ओमानका लागि अकिब इलियासले शतकीय पारी खेल्नुभयो । उहाँले १०८ बल खेल्दै एक छक्का र १२ औकाको मद्दतमा अविजित १०९ रन बनाउनुभयो । पच्चीस दशमलव पाँच ओभरमा आरिफ शेखले अकिबको क्याच छोड्नु नै नेपालका लागि घातक सावित भयो ।
यस्तै जेशन मक्सुदले अविजित ६८ रनको योगदान दिनुभयो । दुबै जनाले १६७ रनको साझेदारी गर्नुभयो । यसैगरी खवर अलीले ४१ तथा जितिन्दर सिंहले २३ रन बनाउनुभयो । बलिङतर्फ नेपालका कुशल मल्ल र सुशन भारीले एक एक विकेट लिनुभयो । यसअघि नेपालका लागि ब्याटिङ गर्ने क्रममा कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र सुवास खकुरेलले ४८ रनको साझेदारी गर्नुभयो । अमेरिकासितको खेलमा तीन रनमै पभेलियन फर्किनुभएका सुवासले २२ रन बनाउनुभयो । यस क्रममा उहाँले एक चौका हान्नुभयो ।
ज्ञानेन्द्रले अर्धशतकीय पारी खेल्नुभयो । अमेरिकासितको खेलमा २१ रन मात्र बनाउनुभएका ज्ञानेन्द्रले उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्नुभयो । उहाँले ५६ रन बनाउनुभयो । मल्लले ७६ बल खेल्दै एक छक्का तथा छ चौकासमेत प्रहार गर्नुभयो । पारस खड्काले ३४ बलमा ३८ रन बनाउनुभयो । यसमा उहाँको एक छक्का र छ चौका सामेल थियो । यस्तै विनोद भण्डारीले पाँच चौकाको मद्दतमा ३५ रन बनाउनुभयो । उहाँ रन लिने क्रममा आउट हुनुभयो । शनिबार अमेरिकासितको खेलमा विश्व कीर्तिमान बनाउनुभएका कुशल मल्लले दुई छक्का र दुई चौका प्रहार गर्दै २८ रनको योगदान दिनुभयो । आरिफ शेखले २८ रन तथा करन केसीले १० रन बनाउनुभयो । सन्दिप लामिछानेले अविजित १० तथा आजको खेलमा डेब्यु गर्नुभएका कमलसिंह ऐरीले अविजित नौ रन बनाउनुभयो ।
बलिङतर्फ ओमानका अकिब इलियासले चार तथा मोहमद नदिमले तीन विकेट लिनुभयो । सतकीय पारीका साथै चार विकेटसमेत लिनुभएका ओमानका अकिब प्लेयर अफ दी म्याच घोषित हुनुभयो । ओमान जितसँगै लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लेको छ । हालसम्म खेलेको नौ खेलमध्ये सातमा जित तथा दुईमा हारका साथ ओमानले १४ अङ्क बटुलेको छ । अमेरिका १२ अङ्कसहित लिगको दोस्रो स्थानमा झरेको छ । नेपालले भने हालसम्म खेलेको तीन खेलमा दुईमा हार तथा एकमा जित निकाल्दै दुई अङ्क जोडेको छ ।
नेपाल लिगको छैटौँ स्थानमा छ । अब नेपालले अन्तिम खेल बुधबार अमेरिकासित खेल्नेछ । आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग दुईमा नेपालसहित, अमेरिका, ओमान, स्कटल्याण्ड, नामिविया, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) र पपुवा न्युगिनी रहेका छन् ।
काठमाडौं । कोरोना भाइरस जस्ता संक्रमणबाट बच्न जीवनशैली प्राकृतिक बनाउनुपर्ने विज्ञको जोड छ । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा नेपाल सांस्कृतिक पत्रकार समाजद्वारा सोमबार...
नाटोजले बाँड्यो पत्रकारलाई एन ९५ मास्क र स्वास्थ्य सामग्री
काठमाडौ । राष्ट्रिय पर्यटन पत्रकार संघ (नाटोज) ले पत्रकारहरुलाई एन ९५ मास्क लगायत विभिन्न स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री वितरण गरेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको...
कोरोनाबाट नागरिकलाई बचाउन जनकपुरमा महामृत्युन्जय जाप
प्रदेश २ Sushila Bishwokarma - March 21, 2020 0
जनकपुरधाम । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिँदै गइरहेको कोरोना भाइरसबाट सबै नागरिकलाई बचाउन जनकपुरधाममा ५ दिने महामृत्युन्जय जाप शुरु गरिएको छ । जनकपुरधामस्थित राम मन्दिरको...
Breaking News Sushila Bishwokarma - October 5, 2020 0
कला Kumar Raut - January 27, 2021 0
Editor-Picks Kumar Raut - July 22, 2020 0
Breaking News Sushila Bishwokarma - September 26, 2020 0
खेल Kumar Raut - April 4, 2020 0
रियो दि जेनेरियो । ब्राजिल तथा फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी)का स्टार फरवार्ड नेयमारले विश्वव्यापी बनेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्ध लड्न आर्थिक सहयोग...
Breaking News Kumar Raut - July 8, 2020 0
भरतपुर । उपचारका क्रममा मृत्यु भएको भनिएका व्यक्ति मङ्गलबार निको भएर घर फर्किएका छन् । स्थानीय चितवन मेडिकल कलेजले उपचारमा लापरवाही गरी ती व्यक्तिको...